प्रबासमा छोराको मृत्युको खबरले परिवारमा रुवाबासी, पूरै गाउँ शोकमा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
प्रबासमा छोराको मृत्युको खबरले परिवारमा रुवाबासी, पूरै गाउँ शोकमा
Posted on फ्रेवुअरी 15, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणेमा भएको वम विष्फोटमा मृत भएका गोकुल नेपालीको परिवारजन तथा गाउँ पुरै शोकमा डुवेका छन् । उक्त विष्फोटमा एक नेपालीसहित नौ जना मारिएका थिए भने साठी भन्दा वढी घाइते भएका छन् । विदुर नगरपालिका ५ को माझीटारमा सुकुम्वासी आफ्ना परिवार लाई छोडेर रोजगारीका लागि भारत पुगेका गोकुल नेपालीको विष्फोटमा मृत्यु भएको खवरले उनका आफन्तजन र गाउँ पुरै शोकमा डुवेका छन् । पिता लाहुरे नेपाली १५ वर्ष अघि दुई सन्तानलाई छोडेर छुट्टैवसे पछि आमा र एक वहिनीको जिम्मेवारी वोकेका २२ वषिर्य गोकुल रोजगारीका लागी नेपाली नै मालीक रहेको काठमाडौको जितपुरफेदी गाविस तिनपिप्लेका गोपाल कार्कीको जर्मन वेकरीमा तीनवर्षदेखि वेटरको काम गर्दै आएका थिए । तीन वर्षदेखि होटलमा वेटरको काम गरेका गोकुल शनिवार साँझ सम्म आफ्नो नियमित काम गर्दै आएका थिए । साँझ ७ वजेको समयमा विदेशी देखीने दुई जनाले होटलमा छोडेको झोला होटल मालीकको निर्देशनमा काउन्टरमा लगी खोल्दा भएको विष्फोटमा गोकुलको मृत्यु भएको नातेदार दाजु सुव्वा नेपालीले बताए । शनिवार साँझको घटना आइतवार विहान परिवारले समाचारको माध्यमवाट खवर सुनेदेखि गोकुल संग वस्दै आएका आमा जुठी, श्रीमती मैना र वहिनी विमला नेपालीको आखावाट आँसुको धारा रोकीएको छैन् । लोग्नेले छोडेपछि छोराको आसमा वाँचेका तीन परिवारको गाँस आइतवार विहानदेखि रोकिएको छ ।
कमाउने एकमात्र सन्तानको मृत्यु भएपछि सार्वजनिक जमिनमा छाप्रो वनाएर रात विताउदै आएका पीडित परिवारको हाँसो खुशी दुवै एकै साथ गुमेको छ मृतक गोकुलका ससुरा मोतीराम नेपालीले बताए । सवैको सहयोगी परिवारका रुपमा रहेका पीडित नेपालीको घरमा यतिखेर दुःखद घटनाको सान्त्वना दिनैको भिडै लागेको छ ।
वावुले सानै उमेरमा छोडेपछि अरुको ज्यालापात गरेर वस्दै आएका गोकुलको तीन वर्ष अघिमात्र मैना नेपाली संग विवाह भएको थियो । विवाह लामो समय सम्म कुनै सन्तान नहुदा परिवारको एकमात्र छोराको मृत्युले थप पिडा दिएको मृतकका श्रीमती मैना नेपालीले बताईन् । Like this:Like Loading...
Filed under: समचार « ‘युरोपमा पर्यटन प्रबर्द्धन गरिरहेका छौं’:- राजदूत प्रमेशकुमार हमाल प्रवासमा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सम्मान »